Aiza ny fandinihana ny SEO marina, raha jerena ny Search Engine Marketing?
Matetika aho no mihaino valim-bava tsy mazava avy amin'ireo mpitarika raharaham-barotra maro ary na dia mahomby sy mahay ary mahay mandanjalanja aza. Ny tsirairay dia mitaraina noho ny fisafotofotoana amin'ny teny hoe Search Engine Marketing (SEM) sy ny fanazavana SEO ampy. Raha ny marina dia samy midadasika avokoa ireo hevitra roa ireo, ary matetika no ampiasain'ny orinasa mpikarakara indostrialy. Andao hiatrika izany - ny ankabeazan'izy ireo dia lavina loatra ka tsy marina marina, fa mitondra marobe fotsiny.
Ndeha isika hanao zavatra mazava farany. Eny, ny Search Engine Optimization (SEO) sy ny Search Engine Marketing (SEM) dia natao hikatsaka fitaovam-pitadiavana - new aspire atlantis tank coils. Saingy manao izany amin'ny fomba samy hafa izy ireo, farafaharatsiny amin'ny fampiasana teny roa samy hafa. Midika izany, ny famolavolana sy ny fanamafisana dia nahazo famaritana mazava sy be dia be, tsy hiteny ny fampiharana ankapobeny. Manoro hevitra aho amin'ny fijerena lisitra fohy amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'izy ireo, mba hahazoana ny fahatakarana marina momba ny SEM, vita tanteraka amin'ny fanazavana mazava momba ny SEO.
Aoka isika hanana analogy be dia be hahitana ny fahasamihafana atsy ho atsy. Alao sary an-tsaina hoe ny fiaranao Digital dia fiara. Ho an'ny fiasa tsara, ny fiarakodiao dia mila mikarakara ny môtôo, arakaraka ny fikojakojana, ohatra, ny famatsiana herinaratra miverimberina. Ny fandraisana ireo dia mety ho metapôma ho toy ny fiandohana, afaka mandeha amin'ny fampitahana tsotra fotsiny isika. Eny, ny fampitahana amim-pahasahiana ahy dia tsy misy fijerena mazava tsara, fa tsy maintsy ataony, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao.
Mitovy amin'ny fizotran'ny Search Engine Optimization ny fitantanana ny môtera. Izy io dia mirakitra ny endrika samihafa, toy ny fanamarinana ny tsindry, ny solika, ny haavon'ny rano, ary koa ny fanaovana asa maro samihafa mba hitazonana ny fiara miasa. Ho an'ny fampivoarana tsaratsara kokoa dia afaka mahazo ampahany hafa ianao, na manolo ny misy miaraka amin'ireo vao haingana kokoa. Raha manao izany ianao, dia hahatratra ny traikefa tsara indrindra amin'ny fiara fitaterana isan'andro. Izao no inoako fa ny fanazavana tsotra momba ny SEO dia. Mba hahatonga io fampitahana io ho resy lahatra bebe kokoa, azontsika atao ny mampitaha azy io amin'ity endriny tena tsy mahafinaritra ity amin'ny fananana fiara misy ny lionon'ny mpamily, hiantso ahy.
Etsy ankilany, ny Search Engine Marketing dia azo ampitahaina amin'ny filana tsy azo iadiam-potoana sy ny fiverimberenana hametraka ny entona vaovao ao anaty tobin-tsolika.Ny fanesorana ny alàlana teo aloha amin'ny asa fanamoram-bola tsy dia lafo loatra ho an'ny fanadihadiana SEO tsotra, dia hita fa mety hisy ny fanamafisana sy ny fanamboarana asa na dia kely aza. Manao izany (e. h. , amin'ny fikarakarana ny tranonkalanao afa-tsy amin'ny ezaka goavana indrindra momba ny SEO), dia ho afaka hamongotra ny ankamaroan'ny fandaniana be loatra ianao mandritra ny fotoana maharitra, fa mbola mitazona ny fiara misy anao, farafaharatsiny amin'ny vatolampy. Ny famenoana ny solosaina ho an'ny SMM, etsy ankilan'izany, dia mbola tsy azo ialana, ka ny hany fomba sisa dia hampiasa ny môtôo, hitondra ny lalanao any amin'izay tianao ary rehefa mila ny fotoana rehetra ianao.
Samy mandeha miasa eo amin'io sehatra io ihany ny SEO sy SEM. Midika izany fa mitondra mpitsidika bebe kokoa amin'ny sehatra an-tserasera ianao. Ho an'ny fanazavana momba ny SEO, ny famokarana tranokala ara-barotra mibaribary tsara sy mitazona anao dia hahatonga anao hifantoka bebe kokoa amin'ny fifamoivoizana. Izany dia fampiasam-bola maharitra sy maharitra, izay manome toky ny firoborobon'ny mpanjifa tena izy, ary noho izany ny vola miditra. SEM hividy amin'ny fikarohana karama, etsy ankilany, mila mihinana vola foana. Manosika ny fifamoivoizanao avy hatrany izy, ka mampiseho vokatra avy hatrany, nefa amin'ny fomba.